डा.भगवानलाई आफ्नै मुटुको भय ! कसरी हेरचाह गर्छन आफ्नो मुटुको सुनौ भगवानकै मुखबाट « Light Nepal
डा.भगवानलाई आफ्नै मुटुको भय ! कसरी हेरचाह गर्छन आफ्नो मुटुको सुनौ भगवानकै मुखबाट
Published On : 12 May, 2017 2:16 pm
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले अहिलेसम्म १४ हजारभन्दा बढी बिरामीको मुटु बचाइसकेका छन्। आफैँ डाक्टर भएर के गर्नु, जोखिम त स्वयम् उनको मुटुलाई पनि छ। डा. कोइरालालाई राम्रोसँग थाहा छ, अरुको मुटु बचाउनका लागि आफ्नो मुटु सुरक्षित हुनैपर्छ। त्यसैले उनी आफ्नो जीवनशैली र खानपानमा विशेष ध्यान दिन्छन्। मुटुका यी चर्चित डाक्टरले आफ्नो मुटुचाहिँ कसरी बचाइरहेका छन् त ? उनकै मुखबाट सुन्नुहोस्।
यसरी बचाउँछु मेरो मुटु …
‘कति चिज मेरो कन्ट्रोलमा छ, कति चिज छैन। उमेर बढ्दै गएपछि मुटुको जोखिम पनि स्वभाविक रुपमा बढ्छ। अझ काठमाडौंको प्रदूषणले थप प्रतिकुल असर पारिरहेको हुन्छ। त्यो जोखिम महिलाभन्दा पुरुषमा बढी हुन्छ। यदि मेरो बुबाआमामा खराब जिन छ भने त्यो मेरोमा पनि आउने हो, जुन कुरा मेरो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर हुन्छ। यसबाहेक मुटु बचाउने कुरा आफ्नै हातमा हुन्छ। मैले आफ्नो मुटु नबचाई अरुको मुटु बचाउन सक्छु भन्ने लाग्दैन। त्यसैले म आफ्नो मुटु बचाउनतर्फ पूर्ण सचेत छु।
हरेक दिन बिहान साढे ५ देखि ६ बजेभित्र उठिसकेको हुन्छु। उठेपछि एक कप कालो चिया पिउँदै पत्रिका पढ्छु। त्यसपछि झोला बोकेर टेनिस खेल्न पुग्छु। एक घण्टा टेनिस खेल्नु मेरो दैनिक रुटिन नै हो। शनिबार र बिरामीको इमरजेन्सी कल आएन भने यो रुटिन प्रभावित हुँदैन। टेनिस खेलेर फर्किएपछि नुहाउँछु र सामान्य ब्रेकफास्ट गर्छु। ब्रेकफास्टमा यही नै खाने भन्ने छैन। सामान्यतया एक गिलास दूध, ब्रेड र फलफूल खाने गर्छु। त्यसपछि करिब ८ बजे घरबाट निस्किसकेको हुन्छु।
बिहानको खाना विरलै, बेलुकाको घरमा
मेरालागि सबैभन्दा प्राथामिकता सधैँ बिरामी नै हुन्छन्। घरबाट सामान्य ब्रेकफास्ट लिएर निस्किएपछि म बिरामीसँगै हुन्छु। बिहानको खाना विरलै खाइन्छ। हार्ट सर्जन भएदेखि मैले बिहानको खाना निकै कम खाएको छु। कहिलेकाहीँ मिटिङमा गएका बेला लिएको लञ्चबाहेक बिहानको खाना नखाएको धेरै भइसक्यो। अस्पतालमै भएका बेला अप्रेसन कोठामै आउने सामान्य खानेकुरा ब्रेड, तरकारी, अमलेट खानेगर्छु। बेलुकाको खाना भने घरमै खान्छु। चिल्लो र भुटेको तथा तारेको खानेकुरा धेरै खान्न। कहिलेकाहीँ ताजा घ्यूसहितको खाना खान मलाई मन पर्छ।
इमर्जेन्सी बिरामी छैन भने सामान्यता टाइममा नै घर फर्किएको हुन्छु। मलाई घरमा खाना खान कसैले कुर्दैनन्, म पुग्दा सबैले खाइसकेका हुन्छन्। बुबाआमा वृद्ध हुनुभएकाले खाना खाने आफ्नै रुटिन छ। डिनरमा यही नै खाने भन्ने हुँदैन। तर सागसब्जी भने प्राय टुट्दैन, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो हुन्छ र मलाई पनि खुबै मन पर्छ। अझ त्यसमाथि घरमा नै बनाएको चटपट मलाई असाध्यै मन पर्छ। समय हुँदा म आफैँ पनि बनाएर खान्छु। खाना खाएर करिब १५ मिनेट टिभी हेर्छु। कहिलेकाहीँ त टिभी हेर्दाहेर्दै सोफामै निदाइन्छ। सामान्यतया ११ बजे सुतिसकेको हुन्छु।
चुरोट कहिल्यै खाइनँ
मैले खाँदै नखाने भन्ने त्यस्तो खासै केही छैन, तर चुरोटचाहीँ जीवनमा कहिल्यै खाइनँ। वियर बेलाबेलाम पिउँछु, पार्टीमा जाँदामात्र। मासु भने प्राय खान्छु। त्यसमा चिल्लो पदार्थ कम भएको कुखुराको मासु खाने गर्छु। खसीको र रातो मासु भने असाध्यै कम खान्छु। माछा स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने भए पनि मलाई खासै मन पर्दैन।
साभार -थाहाखबर/सबिना खनाल